ဆောက်လုပ်ရေးစင်တာသည်အီသီယိုးပီးယားရှိ Awash-Weldie မီးရထားလမ်းတည်ဆောက်မှုတင်ဒါ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလောကအာဖရိက251 သီယိုးပီးယားအဆောက်အဦးစင်တာ, အီသီယိုးပီးထဲတွင်ရှိနေသည်-Weldiya မီးရထားဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်အနိုင်ရ
05 / 07 / 2012 251 သီယိုးပီးယား, အာဖရိက, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
Yapi Merkezi, အရရှိနေသည်အဲသယောပိမီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး 390 ကီလိုမီတာရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး Weldiya 1.7 ဘီလီယံအထိတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တစ်နာရီကို 120 ကီလိုမီတာပေါ်မှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်ဘူတာအပြင်ဘက်သို့ရောက်ရှိကြောင်း Yapi Merkezi မြန်နှုန်းရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုကားကိုလည်းယင်း၏အချက်ပြစနစ်ကငါဖြစ်စေမည်။ ပြည်ပမှာရရှိနေသည်-အီသီယိုးပီးရထားလမ်းစီမံကိန်းများ 1.7 ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့တူရကီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Weldiya ကိုမဆိုဘုံသဘောတူညီချက်မပါဘဲတစ်ဦးတည်းအကြီးမားဆုံးအကျိုးအမြတ်တွေထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆောက်အဦးစင်တာ, 2009 7.6 ဘီလီယံဒူဘိုင်းမီထရိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဂျပန်လုပ်ငန်းစုနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
အီသီယိုးပီးရဲ့မြို့တော် Addis Ababa, အဲသယောပိဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုးသီး Mariam Desalegn အတွက်စီမံကိနျးအတှကျအဆိုပါစာချုပ်ဟာပါဝင်မှုနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီကရရှိနေသည်-Weldiya ရေးစင်တာမှထွက်ရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ဒါများအကြားရထားလမ်းတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအဲသယောပိမီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးပြီးခဲ့သည့်နှစ်က (ERC) အဆောက်အဦးအပြင်ဘက် 390 ကီလိုမီတာအဆိုပြုချက်ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ အများဆုံးသင့်လျော်သောလေလံရေးစင်တာအဆောက်အဦးများကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်သောလေလံ၏အကဲဖြတ်ပြီးနောက် technique ကိုများနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကျုံ့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏4လ, နု၏ရလဒ်များကို, ထိုအဆောက်အဦး Center ကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
လမ်းများတည်ဆောက်ခြင်းမြေသြဇာ Center က Etiyopya`Y furnishes
TCDD-အဆောက်အအုံ Center ကမိတ်ဖက် Talib အီသီယိုးပီးရထားမှဖြစ်သွား
TCDD Hasanbey ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းတင်ဒါ Aykon Elektrik - …
Yeremen - As İnşaatသည် Menemen - Manisa နှစ်ထပ်လိုင်းမီးရထားစီမံကိန်းအတွက်တင်ဒါရရှိခဲ့သည်။
Yerkoy - Şefaatli - Kayseri မီးရထားစီမံကိန်းအတိုင်ပင်ခံနုAltınokအနိုင်ရ
Invensys မီးရထားလမ်းကုမ္ပဏီ Bandirma - Menemen ERTMS (ဥရောပမီးရထားလမ်းအသွားအလာ ...
အီသီယိုးပီး-ဂျီဘူတီနိုင်ငံရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက်3ဘီလီယံချေးငွေ
Marmaray စီမံကိန်း MAPFRE အထွေထွေအာမခံပြေစာများခြင်းဖြင့်လုံလုံခြုံခြုံ
TCDD Kahramanmaras - နူးညံ့သော Turkoglu ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဘိတ်အတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်
သင်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်အအတွက်အီသီယိုးပီးလုပ်ကိုင်မှုကျေးဇူးတင်ပါသည် Fast ငါးနှစ်နှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းနှင့်၎င်းတို့၏မယ်လို့ကြိုးစားနေ: 5318971600
စာသားမ ozdemir ဟုသူကဆိုသည်:
10 နှစ်ပေါင်းငါကျောက် oporotor ဝါယာကြိုးအဖြစ်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြည်ပမှာလမ်း salismakt အပေါ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် 05380746291
ငါသည်လည်းateşciyoperatörüyကိုရီးယားပေါ့) dinamitciy ငါ) ငါသည်ဤစီမံကိန်းကိုပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ပါပြီမစ်ရှင်အတွက်အနှစ် 15 ကျောက်မိုင်းဆည်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိုငါမိုဘိုင်းနံပါတ်ချင်ကျော်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်: 0541 564 01 67
ဆီလျော်ဖို့ ercan ဟုသူကဆိုသည်:
ငါအော်ပရေတာထက်တောင်ဦးမှဩဃustaları.jsb Loader mişeyakကတ္တရာစေးများနှင့်မိုးသည်းထန်စွာတူးဖော်şöförü.elektirik 70 ။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားလျှင်, ငါတို့သည် akman.xnumx sevinirim.erc ဒီမစ်ရှင်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူငါ့မိတ်ဆွေတွေကို join ဖို့သငျသညျချင်ပါတယ်
veysel ရှိရာသို့အလျင်အမြန် ဟုသူကဆိုသည်:
အမျိုးမျိုးသောအပါအဝင် Ben VEYSEL ကြမ်းတမ်း Teo ရဲ့FORMENİYငါ STFA, အန်းကဂျပန်တေးဂီတ, ကုမ္ပဏီအာရပ်ပြည်နှင့်အတူတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး LIKE suduku, လစ်ဗျား, ဆူဒန်, ထို OWNER'm အီသီယိုးပီးမှ7နှစ်ပတ်လည်တည်ဆောက်နေအတွေ့အကြုံ, သင့်စီမံကိနျးတှငျအဖွဲ့ရထားလမ်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာအပါအဝင်ပြည်ပမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 YEAR တွင် projected ။
အမျိုးမျိုးသောအပါအဝင် Ben VEYSEL ကြမ်းတမ်း Teo ရဲ့FORMENİYငါ STFA, အန်းကဂျပန်တေးဂီတ, ကုမ္ပဏီအာရပ်ပြည်နှင့်အတူတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး LIKE suduku, လစ်ဗျား, ဆူဒန်, အပါအဝင်ပြည်ပမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်7နှစ်စီမံကိန်း, အ OWNER'm အီသီယိုးပီးမှ 20 နှစ်ပတ်လည်တည်ဆောက်နေအတွေ့အကြုံ, သင့်စီမံကိနျးတှငျအဖွဲ့ရထားလမ်း .gsm အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာ: 05356890279
ငါကားမောင်းသမားလည်းအနုပညာလက်ရာများ en Faruk kırca 36 ထောက်ပံ့တာငါအစောပိုင်းကဒူဘိုင်းအတွက်လက်ကမြင်းငါ့အသက်အရွယ် 05546944227 izmirde နထေိုငျသီယိုးပီးယား၌သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချင်
Bahri ပေါ့ပါး 05356871098 İMRANLISÝVAS
TERCÜBELဥမင်လိုဏ်ခေါင်း AND လွင်ပြင်ငါ၏အFORMENİY
On-YUKSEL အဆိုပါ CIDE Murve ထံမှSUDİARABİSအန်းကဂျပန်တေးဂီတအီရတ် BEK
IZMIR Metro ရေးဗဟိုဌာနဆောကျမှု istanbol
bytes ÖZDEMİRGÜMÜŞHANEKİRAZLİK DAM
ASKA Antalia ALANIA ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်း
SO အမြန်ရထားတူရကီ Sivas
လေးစားမှု Bahri ပေါ့ပါး
hanifi Koçoğlu ဟုသူကဆိုသည်:
ငါလုံလောက်သောနိုင်ငံတွေအများကြီးထဲမှာအမျိုးမျိုးလုပ် SA အသင်းပြဇာတ်ရုံငါအရှိဆုံးလေ့လာမှုများရတနာလုပ်ချင်သင်ပြောပြရရှိပါသည် formeniy Kemal အဖြူစပ်
Mehmet ကုသိုလ်ဖြစ်ဘောလုံးကို ဟုသူကဆိုသည်:
Mehmet ကုသိုလ်ဖြစ်ဘောလုံးကိုစက်အော်ပရေတာ Loader ငါဤဥပဒေသငျသညျကြှနျုပျသ 15 ပြည်နယ် Elazig ကြိုးစားခဲ့santıralလိုအပ်ပါဘူး saygilarimla ကျောက်မိုင်းဆိုင်ကယ်အဆင်သင့်-ရောထွေးကွန်ကရစ် akhisar ETİBANKမှာ chrome မီးဖိုနွေဦးသတ္တုတူးဖော်ရေးသံသတ္တုရိုင်းသတ္တုတူးဖော် manisa အတွက်နှစ်စဉ်အတွေ့အကြုံကိုပိုးအိမ်ကိုရွှေမိုင်းများ 05393021175 operatoruy ဘီး
Halil Ibrahim ကထား ဟုသူကဆိုသည်:
အဆိုပါ 20 ၌ငါ src VAR.YOL သတ္တုတူးဖော်ရေးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ pisiko EDGE နညျးပညာ Documents လိုင်စင်မော်တော်ယာဉ်များအလွယ်တကူသင့်ရဲ့İSTERİMနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပြည်ပပြည်တွင်းအလုပ်မှာအတူBİLİRİM.SİZİဖို့ထရပ်ကား TR HİYAPအသုံးပွုနိုငျသကဲ့သို့ငါ VAR.DAMPERL အတွေ့အကြုံပေါ့
Bilal လျှပ်စစ်ပြက်။ 0543 668 34 85 ဟုသူကဆိုသည်:
ငါစခန်းကြီးကြပ်သူများကisterim.ayrıအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသည်အတိုင်းသင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြီးကြပ်သူ။ : D + E ကို
Yavuz NATURE ဟုသူကဆိုသည်:
ငါစီမံကိန်းသံဝါယာကြိုးပိုက်ကွန်-05382281494 ဖူးအလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ÇALIŞTIM.EKİBİဖြေရှင်းပဲပြည်ပပိုက်ကွန် AFYON အမြန်ရထား LINE မှာအလုပ်မလုပ်သည်ငါ့အဝေးပြေးရထား DE DAM POLATLI ၌သင်တို့၏ရထားစီမံကိန်းသယောပိပြည် Demirchyan ပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့လို
ayhan နှောင်ကြိုး ဟုသူကဆိုသည်:
screed အင်္ဂတေ AYHAN ATAS လုပ်သားများယခင်ကဆောက်လုပ်ရေးစင်တာဖုန်းနံပါတ် 05438341216 အာရေဗျအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အီသီယိုးပီးအလုပ်လုပ်ချင်သကဲ့သို့ငါအလုပ်လုပ်ကိုင်တယ်
အစ္စမေးလ်ရဲ့ bengisu ဟုသူကဆိုသည်:
ကုရှပြည်နှင့်သင်သည်ငါ့ MEVCUTTUR.1 နှစ်ပတ်လည် NUMBER ကိုSEVİNİRİM.TLFငါ23410 အတွက်BULUNMAKTADIR.DEĞERLENDİRငါ၏အနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါလျှင်, E + D နဲ့ + CLASS src 0544 532 39 + 91 တွေနဲ့အခြားစာရွက်စာတန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချစ်ကြလိမ့်မည်အခြားသတင်းများစီမံကိန်းများ
Erkan DURMAZ ဟုသူကဆိုသည်:
ငါယူဂန်ဒါသမာဓိရှိ, တည်ဆောက်နေစက်မှုနဲ့ငါလုပျဆောငျ Trading Company နိုင်ငံ Manager ကိုအနေအထားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ5YEARS
ငါ Kolin ဆောက်လုပ်ရေး Enterprise ရေ HALEN တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ
အဆိုပါစီမံကိန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ပင်လယ်ရပ်ခြားငါသည်သင်တို့၏စကားပြန်စခန်းစီမံကိန်းဌာနချုပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ကျယ်ပြန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးအလုပ်လုပ်ချင်ငါ SAYGILARIMLA ပွီဖို့သင်နှင့်အတူ ETIYOPYADAK
metin turgut ဟုသူကဆိုသည်:
ငါကအရေးပေါ်ဆေးပညာသငျနှငျ့အတူပေါ့နည်းပညာရှင်calısmakısterımxnumx tercube နှစ်ပေါင်းငါ 8 0542 574 33 ရှိ
Suat karademir ဟုသူကဆိုသည်:
ငါ SuaT oparatörüyအီသီယိုးပီး 05326938302 dozers အလုပ်လုပ်ချင်
caner run မထားဘူး ဟုသူကဆိုသည်:
ငါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလုပ် Loader အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်operatörüyကတည်းက 2006 ကွာ bitlisliy 05314550736 ကနေ run caner
မင်္ဂလာပါကျနော်3နှစ်ပေါင်းအစောပိုင်းကအီသီယိုးပီးတှငျငါကြိုးစားခဲ့ပါတယ် amerikce ပေါ့လျှပ်စစ်မီးတော်တော်လေးကောင်းသောမာစတာသင် 0545 561 24 37 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချစ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်
Yusuf polat ဟုသူကဆိုသည်:
မင်္ဂလာပါ, ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမာစတာ amerikce အီသီယိုးပီးတရားမျှတစွာသည်ကောင်း3အစောပိုင်းကနှစ်များတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ
ငါ decoupage နှင့်အတွေ့အကြုံရှိ t ကိုလမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပိုးနသန်းကောင်အတွက်နှစ်ဆဆွဲထုတ်şöförlügenလုပ်နေတာငါပညာတတ်ဆောက်လုပ်ရေးဖို့ကြိုးစားနေkırşehirတူရကီလမ်းမကြီးအောင်လက်ရှိတက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည်သင်ကကားမောင်းသမားဆန္ဒရှိကျနော်တို့သင်တန်း oparator အသင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်ဆိုပါကကျွန်မ 10 နှစ်ပေါင်း im အဖြစ်ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းကြောင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကြောင့်ကျနော်တို့အရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်. တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြ လက်မျှော်လင့်ချက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြီးသား 05533132646 0534 434 4230 ၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားမုသာစကားကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ထွက်ပေါက်၏ alacaz အဆုံး saygilar.xnumx ကြောင့်အီသီယိုးပီးအတွင်းဆောက်လုပ်ရေး site ၏ asciba polatyolyap သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်အဖြစ်ဟိုင်းငါအဘို့အလုပ်မလုပ်
မင်္ဂလာပါ Polat5သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်အော်ပရေတာကိုငါပေးမည်ငါထွက်ပေါက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုက, ladle ရဲ့အဆုံးမှာ xnumxyil YOLYAPI ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်
မင်္ဂလာပါကျနော်လုပ်နေတာငါUzmanıyımပင်စင်စား၏ 20 နှစ်ပေါင်း pasaportumv နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သင်သည် calisabilirim.xnumx နှင့်အတူ lastikcilik 10 နှစ်ဖြစ်ပါသည်
အလီ Goren ဟုသူကဆိုသည်:
Eksavat ငါ NTF နှင့်အော်ပရေတာများ၏ te ဆောက်လုပ်ရေးထို့နောက် cengiz ဘူလ်ဂေးရီးယားဆိုဖီယာငါလက်ရှိAYŞEဆောက်လုပ်ရေး te takimat အလုပ်အတွက်ကြက်ဆင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လမ်းကိုငါပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်သင်နှင့်အတူလေ့လာသွားချင်ကားတစ်စီးကြိုးစားခဲ့ map နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သည်။ အလီ Goren အဆက်အသွယ်အရေအတွက်: 05413742974
Oguz Irene ဟုသူကဆိုသည်:
ငါသင်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နိုင်ငံရပ်ခြားစီမံကိန်းများတွင်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ငါအထက်တန်းကျောင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ဌာနvardır.meslekအဆိုပါ sertika လည်း 20 နှစ်ပေါင်းvardır.oğuz Irene / 10 ကတည်းကအဆင်သင့်-ရောထွေးကွန်ကရစ်စက်ရုံအော်ပရေတာyapmaktayım.thbbမှဘွဲ့ 05386730044 နှစ်ပေါင်း
Bilal bolat ဟုသူကဆိုသည်:
ငါ၏အအိပ်ဆောင်အတွေ့အကြုံကို Mehmet လီငါtopoğrafအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်သီယိုးပီးယားကနေ offset ထွက်ရတယ်opratörüy 26 နှစ်ပေါင်း loader
tlf unum0543 827 09 xnumxbilal bolat
ငါလုပျနိုငျ5နှစ်ပေါင်း loader နဲ့ eskavot operatörüyငါသီယိုးပီးယားဝါယာကြိုး 24 05413895543 ၌သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချင်နှစျနှစျမှာညှိပြီးခံရခြင်းဖြစ်သည်
ယခင်ကသင်တို့အားငါ 8 ရဲ့ရရှိနိုင်karabükလအလုပ်လုပ်ခဲ့ဈလည်း Zonguldak အတွက်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြ
Hasan ပင်ကိုယ် ဟုသူကဆိုသည်:
Slm ben ကားမောင်းသမားမိုးသည်းထန်စွာမော်တော်ယာဉ်များ, E + D နဲ့ + S ကိုမိုဘိုင်းရိန်းငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ် src pisikoteknik အလုပ်ထရပ်ကား loader ကိုရေပုံးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက် 05425630703
slm ငါသုံးလှပသောကြုံတွေ့နဲ့ကျွန်မအင်္ဂလိပ် arabca kırşehirသပ် formeniy tercübelပန်းပဲဆရာကနေရေးသားငါငါ့အလုပ် SSK ကြောင့်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြ 05425196849 Cebu မှအငြိမ်းစားလက်ရှိအသင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှိ
Orhan Ercan ဟုသူကဆိုသည်:
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ ငါ D နှင့်အတန်းအစား E ကိုလိုင်စင်ရှိသည်။ Backhoe loader နဲ့ loader မှအော်ပရေတာ။ Kutlutas နဲ့ကျွန်မ Dilingha Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီး-မွန်းရှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ခဲ့ပါသည်။ ငါရုပ်သံလိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ငါ 35 နှစ်ပေါင်းoperatörlükမိပါတယ်။ ငါနေဆဲအလုပ်လုပ်တာပါ။ ငါသီယိုးပီးယားများအတွက်စက်အော်ပရေတာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။
ငါမကိစ္စ 20 ငါ adanaliy စက်တွေနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းချင်ပါတယ်ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူပေါ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားအော်ပရေတာ xnumxyillik
ဒဏ်ငွေ Ahmet ဟုသူကဆိုသည်:
II ကိုဒီဂရီအတွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းkaynakcı။ ငါ tipper7နှစ်ပေါင်း .5358399378 ကိုသုံးပါ
Jalal Long က ဟုသူကဆိုသည်:
Tig နဲ့ကျွန်မအနေနဲ့လျှပ်စစ်ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းအဖြစ်အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏နှစ်ပေါင်း 8
26 နှစ်ရှိပြီ။ ငါပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။
ဿွာန် Alabasta ဟုသူကဆိုသည်:
ယခင်က Tel ခဲ့ငါအနှစ်တူးဖော်သင်တို့ကိုငါ၌ခိုလှုံနေတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး yapiyorum ကားမောင်းသည်ငါပြည်ပမှာငါ၏အတှေ့အကွုံမြား၌ဤစီမံကိန်းကိုအပေါ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကိုချစ်မယ်လို့ 20: 05357828580
ငါပြည်ပမှာအလုပ်ရှာနေတာ 05442595656 operatöruyဂျမ်ဘိုရော့ခ် atlas
bedri မှ tokm ဟုသူကဆိုသည်:
ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ အကယ်. မင်္ဂလာပါကျနော် 05394125095 kaynakcısıyရောက်ရန်ပြည်ပအတွေ့အကြုံများနှင့်လျှပ်စစ်မီး bedri tokm ရှိ
တိုက်ရိုက်လွှ cem ဟုသူကဆိုသည်:
ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ slm အာဖရိကသံမဏိကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းဝေးပွဲကိုခွေးလှေးအိမ်များငါဝါယာကြိုး 0536 605 37 65 အလုပ်လုပ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဂါဘွန်အဆုံး၌သင်တို့၏အဆုံးစွန်သစ္စာအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူချင်ပါတယ် pureje လုပ်ကြံတောင်ဘက်၏အန္တိမမာစတာခဲ့သည်
ငါသည်သင်တို့ 05354707522 မဖြစ်စေကြပါလျှင်အခွအေနပေါ်ပေါက်တယ်အနုပညာ foremen အတွက်တာဝန်သင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအတွက်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်များမတိုင်မီလုပ်ခဲ့တယ်ထက် slm
m.sait ülger ဟုသူကဆိုသည်:
ငါအလုပ်ပြီးစီးလက်မှတ်များလေးစားမှုရတယ်အပေါင်းတို့၏အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့သတ္တုကို arc နှင့်စက်မှုဒီပလိုမာ AmAlArA မာစတာကိုမဆိုရည်ညွှန်းပေးနိုင်ပါသည် 05452945488
halil အကျိုးကျေးဇူးများကို ဟုသူကဆိုသည်:
ငါသည်လည်းငါအကြံအဖန်တွေချည်းဆောက်လုပ်ရေးထောက်ပံ့ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပရိသတ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါယခုအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်တယ်ငါအဆုံးတိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအဘာသာစကားအကျင့်ကိုကျင့် etihopy ချင်ထိုအခါငါပြောနေတာကိုသိလမ်းဖြစ်၏ etihopy ။
MRH ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင် pasap 05425282571 နှစ်ပေါင်း en ရေနံတင်သင်္ဘောမှ 82နှစ်ပေါင်းtercübဝါယာကြိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မtercübeလေးစားမှုရှိတမ် 05425282571 en Ibrahim pisikoteknik src ငါ၏အကားမောင်းသမားရဲ့လိုင်စင်ကိုလှည့်မည်မဟုတ်
cemalettin ရောင်းချခဲ့ ဟုသူကဆိုသည်:
ငါ src pisikoteknik ရရှိနိုင် pasoport တစ်နှစ် harfiyatxnumx5နှစ်ပေါင်းyıltankလိမ့်မယ်ငါ t ကိုသင်5အရိုအသေ Wired ချင်tercübeအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးကားမောင်းသမားရဲ့လိုင်စင် en MRH ကိုရောင်း cemalettin
Mustafa Akbulut ဟုသူကဆိုသည်:
မင်္ဂလာပါကျနော်အဇာဘိုင်ဂျန်မှာရှိတဲ့အီသီယိုးပီး aydeniz Ahmet တည်ဆောက်ခဲ့ကြ Polat လည်းနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အလုပ်လုပ်ငါ့အတွေ့အကြုံကကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံစင်တာistýyorumအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ငါ၏အအဖွဲ့သည်စီးရီးရရှိပါသည်ကျော်လွန်သွား
ဟဲလိုငါသည်လည်းသင်တို့ကိုငါ40542 697 80 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချစ်ကြလိမ့်မည်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်ကိုsıfırlamacıy ray အရင်းအမြစ်များ၏ 06 နှစ်ပေါင်းအပေါငျးတို့သရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်း
5 နှစ်ပေါင်းကျွန်မအီသီယိုးပီးအမှိုက်ပုံထရပ်ကားမောင်းသူ Mehmet 05448445084 ငါသည်သင်တို့၏ site ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ငါပြည်ပမှာ 0541 416 43 44 အလုပ်လုပ်ချင်ထရပ်ကားမောင်းသူအရေးပေါ်သိမ်းထား
hi ဈငါ 1 ဝါယာကြိုးမှသင်တို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိသည်ဖို့လိုခငျြ tercube pasap အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Denizli Yapıray 05416413146 နှစ်ပေါင်းထံမှဘိန်းယခင်ကအတိုင်းအတာhuseyın
အပူပိုင်းနှင့်ကွန်ကရစ် Semix ငါသည်ငါ့operatörüy, ကန်, ဆိပ်ခံတံတားမှ, GURIS နှင့် techno စနစ်ကမိုဘိုင်းသုံးပါနဲ့ငါပာပင်လယ်ရပ်ခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ် 0543 937 2499 ရှာနေ concrete'm ထုတ်လုပ်ကြောင်းခြောက်သွေ့တဲ့ကွန်ကရစ်၏နောက်ဆုံးသုံးနှစ်ကြာအတွက်ခက်ခဲလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကိုအသုံးပြုဖို့proğramlarကွန်ကရစ်စက်ရုံဖြစ်နိုင်သည့်လောင်းဈေးကှကျ
ekrem General ဟုသူကဆိုသည်:
ဟဲလို Loader ငါမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏ 10 နှစ်အတွင်းအဘို့ငါကျေးဇူးတင်စကား 0536 230 21 81 ၌သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချင်ပါတယ်tecrübeliyimရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, မြေအောက်ရထားနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဒီအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့operatörüyများမှာ
ဟဲလိုတူးဖော်, loader နဲ့ JCB operatörüyငါဒီမြန်နှုန်းရထားလမ်းလုပ်နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း 7, အခြေခံအဆောက်အအုံများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, မြေအောက်ရထားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းငါသည်သင်တို့ကိုအီသီယိုးပီး 0533 577 18 57 ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်အလုပ်အတွက်အတွေ့အကြုံရှိသည်
မင်္ဂလာပါငါ့နာမ Omer က Is
Dumpers - en - E-class ကိုလိုင်စင်
src245+ I ကိုရှိအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများ, ငါသီယိုးပီးယားမိုဘိုင်းအဘယ်သူမျှမ၌သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချင်: 0541-607-0474
သို့သော်လည်းငါသည်သင်နှင့်အတူအီသီယိုးပီး puroje ကုန်တင်ကားသည် Tier အမှု၌ကယ်လိုရီချင်ပါတယ်ခိုလှုံရာYapı Merkezi yedkili tecrube
တစ်ဦးချင်းစီမဖြစ်မနေ ac ဟုသူကဆိုသည်:
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မင်္ဂလာပါငါသီယိုးပီးယား၌သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်စားဖိုမှူး setup ကိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ် seltene ရထားလမ်း circuit ကိုtıraksorkut cysteine ​​ကတ်ကြေးအင်ဂျင် baliza ကိုယ်စားနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ငါငါ IST ဖြစ်ကြောင်းကို
Mithat ကြယ်များ ဟုသူကဆိုသည်:
ငါ Borusan guçmakinaငါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများဦးစီးဌာနအတွက်နည်းပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ရေခြားမြေခြားကိုငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ငါငါလစ်ဗျားရုစ်ဝါယာကြိုး 538 865 85 65 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ် meraba
Ali ခွငျး ဟုသူကဆိုသည်:
လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့ကျွန်မ ADANA လေးစားကြသငျသညျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသောအားလုံးစာရွက်စာတမ်းများ၏မာစတာxnumxyıllık
ငါသည်သင်တို့ကို xnumxramaz ÇAKIRနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချစ်ကြလိမ့်မည် 23 နှစ်ပတ်လည်မိုးသည်းထန်စွာvasıtaşoforuy
Mehmet အဆိုပြုချက်ကို ဟုသူကဆိုသည်:
မင်္ဂလာပါ, ငါလက်သမားအီသီယိုးပီး isterimm သံမှိုနှင့်အလွန်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးနှင့်ustayımmအလုပ်လုပ်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်အလေ့အကျင့်များ 15 နှစ်ပေါင်းaleyküm
Ismail akkuş ဟုသူကဆိုသည်:
SLM Ben KÜTAHYATAVŞANLID Ismail AKKUŞငါİSTERİM 15 20 5335762580 နှစ်စဉ်ထရပ်ကား T ကအတွေ့အကြုံထဲမှာသယောပိပြည်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ငါ Wired ဖူး
ငါကားမောင်းသမားadanalıy en ရေးသားသူ Mehmet ပေါ့ 295နှစ်ရှိပြီ slm ငါသီယိုးပီးယား၌သင်တို့နှင့်အတူ Workin '' လိုခငျြပြည်ပမှာအတွေ့အကြုံရှိသည် 05323250069
အီဘရာဟင် elci ဟုသူကဆိုသည်:
ငါသည်သင်တို့ကိုအတွေ့အကြုံရှိသည်သီယိုးပီးယားမှာအလုပ်လုပ်ချင်သောအိပ်ဆောင်အပြင်ဘက်အသက်အရွယ်eskavatöroprturm၏ 34 18 နှစ်ပေါင်းထံမှ slm ben အီဘရာဟင် elci simav kutaha ကျွန်မရဲ့အသိပညာဝါယာကြိုးပူဇော် 05443400463
မင်္ဂလာပါကျနော်eskavatörအော်ပရေတာက y xnumxyil, ငါတကယ်ကြောင့်မြင်သာထင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်သီယိုးပီးယားမှာအလုပ်လုပ်ချင်ကြပါပြီ
Slm .Siz 05363380981 နှင့်အတူလုံခြုံစွာလုပ်ကိုင်ဖို့yurtdışındတူးဖော်အော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ 05424529563 မိုဘိုင်းနယ်hüdayiငါသည်သင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအတားအဆီးလုပ်ကိုင်ဖို့ကိုချစ်မယ်လို့oparatörüy travellin eskavatör
28 နှစ်ပေါင်းငါသည်ငါ့အသက်အရွယ် 47 05355645806 tlf operatörüyမျှeskavatörရှိtejrübe
10: ပြည်ပမှာအတွေ့အကြုံကိုကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ operatoruy ၏ 05398289874 နှစ်ပေါင်းငါသီယိုးပီးယားမှာအလုပ်လုပ်ချင်သောသင်တို့နှင့်အတူရှိအဆက်အသွယ်များ
Mehmet ထွက်ပြေးသောအခါ ဟုသူကဆိုသည်:
slm ငါအခမဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအီသီယိုးပီး en ငါ၏အကားမောင်းသမားxnumxyıllıkအလုပ်လုပ်ချင် 10
ငါဖိလစ်ပိုင် iyigun မျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့ငါ 2008 သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ယခုအဟောင်းပေါ့ preoccupy ကျွန်မရဲ့စစ်မှုထမ်းပြန်လာရန်ရှိသည်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တယ်ပင်လယ်ရပ်ခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှာဖွေနေငါမရှိတော့ငါလျှပ်စစ်အီလက်ထရောနစ်ချင်ပါတယ်ဒီအဆို့ရှင်ရဲ့ငါ့အလုပ်လုပ်မလုပ်အတားအဆီးငါ၏အ journeyman ရဲ့လက်မှတ်ကိုဤဖြစ်စဉ်အပေါ်ရှိပါတယ်tecrübeliyimxnumxခံရတယ်
SuaT caulk ဟုသူကဆိုသည်:
ငါ 10 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုပျင်း piling အကျင့်ကိုကျင့်အတွက် caulk နှင့်အဝါရောင်ရိန်းရာဇမတ်ကွက်စန်း crawler ရိန်းကိုအသုံးပြုဖို့ meraba ခြေလှမ်း SuaT ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ဘူမိZemintaşခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လစ်ဗျား 13 လမစ်ရှင်များကိုအဖြစ်နိုင်ငံရပ်ခြား ERCO မြေညီထပ်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချစ်ကြလိမ့်မည်ခဲ့ပါဘူး။ မိုဘိုင်း 0538 204 41 37
Ridvan မကြောက် ဟုသူကဆိုသည်:
ငါလေးဆယ်ပေ Tipper လမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ 05424732065
မင်္ဂလာပါငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်, ငါသည် sokdem အတွက်ငါ့သခင်ထံမှအလုပ်လုပ် 10 နှစ်ပေါင်း 05304624726 temeldentoplukonut စီမံကိန်း၏ koprukiris ဖြစ်ပါသည်
Mehmet aliboztep မှ ဟုသူကဆိုသည်:
Mehmet လီ boztepe E-လူတန်းစားမိုးသည်းထန်စွာယာဉ်များ 05364428806 ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ကားမောင်းသမား
မင်္ဂလာပါငါ 536 442 88 06 iştiyorum..teli.oသည့်အိပ်ဆောင်dıış၌သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် Mehmet လီ boztepe မိုးသည်းထန်စွာယာဉ်များဆိုဖာဖြစ်ကြောင်းကို
Orhan မြှားတောင့် ဟုသူကဆိုသည်:
hi ဈ Orhan မြှားတောင့်မိုးသည်းထန်စွာယာဉ်များငါသည်သင်တို့ကိုပြည်ပမှာ .0 537498 29 90 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်şofoüy
Mehmet လီ boztepe ဟုသူကဆိုသည်:
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ကတည်းကဟဲလိုငါ 1992 နှစ်ပေါင်းငါ၏အခွင့်လိုင်စင်şöfüruyမိုးသည်းထန်စွာစီးပွားဖြစ်မိုးသည်းထန်စွာယာဉ်များရှိသည်။
ပျော်ရွှင် aksoy ဟုသူကဆိုသည်:
ငါသည်ဤစီမံကိန်းကိုပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူအလုပ်မလုပ်ချင်ငါ 0538 021 17 49 operatörüyeskavatör
Hasan üstüntaş ဟုသူကဆိုသည်:
25 နှစ်ပတ်လည် loader နဲ့ crawler Loader ငါဖွဲ့စည်းပုံမှာ 05333472543 tlf ၏ဗဟိုအလုပ်လုပ်ချင်operatöruy
ငါကားမောင်းသူ 8 0546 781 79 လုပ်ကိုင်ဖို့ကိုချစ်မယ်လို့အမှိုက်ပုံထရပ်ကားထိုးဖောက်မှု Slm 57 နှစ်ပေါင်း
ငါ 05362222568 ခံရဖို့သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်အကြီးစားထရပ်ကားယာဉ်မောင်းများငါ့ကိုငါသည်သင်တို့၏အရေးတကြီးလုပ် SA တန်ဖိုးထားမယ်လို့အလွန်အရေးတကြီးအကူအညီအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ
ငါအပြည့်အဝသင်တို့သည်ငါ sayin အရေးပေါ်ငါ့ကိုကူညီဝမ်းသာတယ်, ငါလိုအပ်သမျှစာရွက်စာတမ်းများအလွန်အရေးတကြီးအလုပ်အပြည့်အဝပတ်စ်ပို့ရှိ 05362222568 အလုပ်လုပ်ချင်စာရွက်စာတမ်းဒစ်ဂျစ်တယ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် pizkoteknik စာရွက်စာတမ်းအရာအားလုံး '' pizkoteknik ငါ ED ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် src စာရွက်စာတမ်းရှိထရပ်ကားလယ်ထွန်စက်အတှေ့အကွုံကိုပစ်သိမ်းရန်, ငါသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း saygilar အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှယခုအချိန်တွင်စတင်
Ahmet Karamahmut ဟုသူကဆိုသည်:
ငါ SUVA နှင့်ကြွေ tile ustasıyımလိုငါ, မကြာသေးမီကသင်တို့နှင့်အတူအဘယ်အလုပ်ကိုမျှပြဿနာများ fit စက်ရုံအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် formenlik ငါသည်လည်းအန်းကဂျပန်တေးဂီတနှင့်အတူ MORITANI ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြငါအထည်အလိပ် HESFIBEL ရေးရာဝယ်လေးစားကျွန်မအလုပ်၏အီသီယိုးပီးသို့မဟုတ်3နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီရှိတယ်ငါပြည်ပမှာတွေ့ကြုံခံစားချင်ပါတယ်အလုပ်အတွင်း slm ben သင့်ကုမ္ပဏီတွင်ကြည့်ပါ 0536 880 74 25
Aziz က Akkus ဟုသူကဆိုသည်:
hi ငါ မှစ. သန့်ရှင်းသူakkuşမြေပြင်စစ်တမ်းများတွင်အလုပ်လုပ်ချင်နှင့်အဖွဲ့သည်နှုန်းဆေးထိုးဘို့အရှာဖွေရေးရေနံတွင်းတူးoparatörüငါ 22 နှစ်ပေါင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီအတွေ့အကြုံ, သင့်တူးဖော်ခြင်းနှင့် grouting အလုပ် texture ရှိပြည်ပမှာအမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများကို2နှစ်များတွင်အတွေ့အကြုံအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မှာ IR လျ: 0536 963 25 54
Mehmet နိုဝင်ဘာလ ဟုသူကဆိုသည်:
မင်္ဂလာပါငါ GEMONT 05376738948 အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့မကြာမီက Tatarstan အတွက်အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီခြောက်နှစ်ပြည်ပမှာ Mehmet ဓာတ်ငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားkaynakcısıyဖြစ်ကြောင်းကို
ငါ Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့, alep sungurlu 05312958663 ရန်ကြိုးစားခဲ့